NgeSonto, uDisemba 10, i-2006 NgoLwesine, ngo-Okthoba 23, 2014 Douglas Karr
Sonke saqala endaweni ethile!
Bengikhuluma nomngani wami kusihlwa nge-Social Networking nekusasa lami kwi-Industry. Ngibe nesidlo sasemini esimnandi, esikhuthazayo nomngani omuhle, uPat Coyle, ngesonto eledlule. Bengihlale ngingu-technologist… jack wabo bonke abathengisi, ngingazi lutho… kuze kube muva nje. Ngonyaka odlule ngigxile kakhulu ekuziphendukeleni kwe-Intanethi.
Imigqa yengxoxo, ukukhishwa kwabezindaba, ukumaketha, izindaba nengxoxo kufiphele ngokuphelele. Imigqa yezobuchwepheshe nayo, nge XML, RSS, ukubhuloga futhi SEO. Ijubane esihamba ngalo liyathandeka. Asikho isikhungo sokufunda semfundo ephakeme esingahle sakhe izifundo. Ngokushesha njengoba udizayina ikharikhulamu, ivele iphelelwe yisikhathi. Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi abantu abafana nami bazungeze umlutha wobuchwepheshe kubaluleke kakhulu.
Okuqukethwe kwami ​​kwebhulogi kuyahlukahluka phakathi kwesiqalo nesithuthuke ngenhloso. Ngiyazisunduza ukuze ngifundise, ngivivinye, ngivivinye wonke amapulatifomu nobuchwepheshe bamuva ukuze ngibe sesimweni sokuthembela kanye nobuchwepheshe phakathi kontanga yami. Kuze kube manje, kuhle kakhulu ... Ngithola lokho kuqashelwa!
Ngabe angikaze ngiyifunde uma kungengenxa yayo yonke eminye imithombo eyabelane ngamava abo ku-inthanethi. Yisizathu sokuthi ngivame ukuyibuyisela phansi inothi futhi nginikeze umbono wabaqalayo. Othile uthathe isikhathi sami futhi ngifuna ukubuyisela umusa! Ukufunda ngalezi zinto kungasabisa, ngifuna ukukhuthaza abantu, hhayi ukubaphoxa nokubamisa. Abanye benu bangafunda okunye engikubhalile bese bethi, "Cha duh!". Kulungile… vele unamathele kimi futhi sizobuyela ezingeni lakho ngokushesha.
Yilokho ngempela iphuzu lebhulogi yami. Ngingathanda ukwenza okungaphezulu kokuphinda ngivuselele izixhumanisi nezindaba - ngifuna ukukhuluma impela ngisesikhundleni esizofundisa abanye ukuze bakwazi ukwenza izinqumo. Kuwo wonke amakhulukhulu wokuphakelwa engikufundile, kuncane kakhulu okusebenziseka kumsebenzisi wokugcina noma ebhizinisini. Ngifuna ukuba yisihlungi salolo lwazi, okuphakathi kwakho, umhlahlandlela wakho.
Nginjani? Ungakuyekeli ukugxekwa… Nginabantu abangamakhulu ambalwa abavakashela isayithi usuku ngalunye, kodwa bambalwa kakhulu abaphawulayo. Amaphesenti angama-20 + akho abuya ephindelela. Yini engiyenza kahle? Ngifisa ukwazi! Futhi, ngiyabona ukuthi kunokuvakashelwa okuningi okuvela ngaphandle kwe-US engingathanda ukuzwa impendulo yakho!
Nayi ithiphu entsha yalabo abasha nabanolwazi. Manje ngizoqiniseka ukubeka amathiphu kunoma yimaphi ama-acronyms amnandi okungenzeka abantu abasha bangawaqondi. IMHO, lokhu kuyinto enhle enhle yokwakhiwa kwewebhusayithi. Akusona isixhumanisi, kepha sinikezela ngemininingwane ethe xaxa uma umsebenzisi engaqondi ukuthi isichazamazwi noma ibinzana lisho ukuthini ngokumane ubeke phezu kwalo.
Nakhu ukuthi kwenziwa kanjani (kubuyekezwa kubonga ithiphu ngumfundi ku- isifinyezo umaki):
Ungakwenza futhi lokhu nge isikhathi umaki usebenzisa i isihloko Isici:
Nginesiqiniseko sokuthi ngingajikijela inkinobho entsha yomhleli noma isigaba ku-WordPress ukusisingatha… mhlawumbe ngolunye usuku kungekudala!
Ngiyabonga futhi ngokufunda! Khumbula ukuthi sonke saqala endaweni ethile! Fundisa abafundi bakho.
Tags: isifinyezoumaki wegamafundisa abafundihoverhambisa umbhaloi-mouseoverithegi yespanisihloko se-span
I-Blog Tag: Izimfihlo ezi-5 Ngami
Dec 11, 2006 ku-12: 44 AM
Ngicabanga ukuthi ibhulogi yakho yinhle. Ngibe khona izikhathi ezimbalwa ukukufundela okuthunyelwe ngakho-ke ngicabanga ukuthi wenza okuthile okulungile. Uma, ngemuva kwakho konke, unabafundi ababuyayo ukuze uthole okuningi… awuphumelelanga?
Qhubeka nomsebenzi omuhle.
Dec 11, 2006 ku-5: 52 AM
sebenzisa ithegi efushanisiwe yalokhu.
I-inline styling yinto embi kunazo zonke ongayenza, iba uma ufuna ukuguqula isitayela sakho se-acrony (ufuna ukushintsha ukusuka kudeshi uye kolayini wamachashazi ngokwesibonelo) kufanele ushintshe wonke amagama afinyeziwe.
Ukwenza isitayela ithegi efushanisiwe kufayela lakho le-.css kulula kakhulu.
enye into eyodwa: abafundi besikrini bezimpumputhe bazosebenza kangcono kakhulu kusayithi lakho, uma usebenzisa umaki we-xhtml olungile wento elungile.
Dec 11, 2006 ku-10: 18 AM
Ngiyabonga kakhulu! Kuzofanele ngenze okuthunyelwe mayelana nokubloga okuphumelelayo ngolunye usuku kungekudala. Angikulinganisi ngezibalo nemali engenayo. Kumayelana nokuphawula okuhle njengakho.
Dec 11, 2006 ku-10: 19 AM
Siyabonga ngalokho! Ngangike ngafunda ngomaki wegama elifinyeziwe esikhathini esedlule kepha ngangixwaya kakhulu ngokulisebenzisa. Kodwa-ke, njengoba kubonakala ngathi iyahambisana neXHTML futhi ijwayelekile… ngizoyishutha.
Dec 11, 2006 ku-10: 27 AM
Ibuyekezelwe kwithegi efushanisiwe ngenxa ye-hey!